Isiketshi sihlaziywa kwinguqulo ye-4.1 kunye nelogo entsha, ii-icon kunye nokunye | Abadali be-Intanethi
Umzobo 4.1 uzisa ujongano olwenziwe ngokutsha kule app yoyilo lwedijithali
Nangona sijamelene nokunyuka kwe-Adobe XD, uSketch usesona sicelo sikhethekileyo kwifayile ye usetyenziso kunye noyilo lwewebhusayithi,, kunye nawo onke la macandelo abawenzayo. Yiyo loo nto iqela elixhasa ukukhula kwalo liqhubeka nokusebenza nzima ukuzisa uhlaziyo.
Inguqulelo 4.1 ikhutshwe kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo kwaye phakathi kwezinto zayo ezinqabileyo, ezinje ngamanqaku amatsha, yinto enokuba yiyo ujongano oluhlaziyiweyo kunye noyilo kwakhona kwi icon yayo. Olu hlaziyo lusimahla kwabo banesicelo, esixabisa i- € 94,45.
Olona tshintsho lucacileyo yile logo yeapp. Ungatsho ndlelantle kwidayimani eneempawu ezininzi ukungqinelanisa nokuba yintoni eya kuba ngumthamo welo litye lixabisekileyo lisetyenziswe njengeyona nto ibalulekileyo xa ukhumbula esi sicelo. Ngoku ilogo iya kuleyo mibala iflethi, eligama lokujonga uninzi lweempawu kunye neelogo zezinye iinkonzo kunye neeapps.
Iigradients zisusiwe kwiimpawu zeapp, kwaye zibolekisa ekubeni ulwimi olusicaba ngakumbi ukuhamba kunye nokuyilwa ngokutsha kwelogo. I-Bohemian Coding, omnye wabaphuhlisi beSketch, ithi oku kujongeka kubukeka kuya kuqhutyelwa kwezinye iinxalenye zeapp kunye nesazisi seSketch kwiinyanga ezimbalwa ezizayo.
Kude kube olu hlaziyo, kwimeko nganye yesimboli kuxwebhu, ungakwazi bhala ngaphezulu umbhalo kunye nemifanekiso njengoko zazilungiswa. Ngomzobo 4.1, unokulungisa naziphi na iisimboli, ukuba nje zilingana ngokulinganayo, ezikuvumela ukuba ubeke endaweni "iqhosha" elineqhosha kunye nohlobo oluphuculweyo.
Olunye uphuculo lubuchule bokukhusela iifayile kwi-Sketch Cloud, ukhetho olutsha kwimenyu "Cola ngohlobo" Kuba xa ufuna ukuncamathisela isicatshulwa esityebileyo kwi-app, iimilo, ukhetho lokuma ngokuthe nkqo nangokuthe tye kunye neendlela ezahlukeneyo zebug ziye zaphuculwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » Umzobo 4.1 uzisa ujongano olwenziwe ngokutsha kule app yoyilo lwedijithali
Umlambo weencwadi ezili-10.000 XNUMX ugcwalisa izitrato zaseToronto
Izikhokelo zentetho yakho kwi-Mac